ZRP Police Commissioner, Godwin Matanga
Mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuyambira vanhu kuti vasachengeta mari yakawanda mudzimba dzavo, mumahofisi ebasa kana kufamba vakatakura mari zhinji, vachiti kuswera zuro muHarare, mbavha dzakanga dzakapakata pfuti dzakabira mumwe muzvinabhizimisi mari inoita zviuru makumi mana nezvishanu zvemadhora ekuAmerica (US $45,000) paakanga akamirira kuti robhoti richinje.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, Muzvare Chenayi Mutambasere, vaudza Studio 7 kuti vanhu havachavimbi nemabhanga, vachiti kazhinji vanhu vanotadza kuwana mari yavo pavanenge vava kuida, sezvakaonekwa mazuva maviri Christmas isati yasvika, apo vanhu vakatadza kutora mari dzavo.
Muzvare Mutambasere vati vanhu havakanganwi zvavakamboitirwa apo vakamuka rimwe zuva vakaudzwa kuti huremu hwemari yavo yakanga iri mumabhanga hwakanga hwaenzana, dhora padhora, nedhora remuZimbabwe, izvo zvakakonzera kuti vazhinji varasikirwe nemari yavo, pamwe chete nemari dzemudyandigere dzakasiyiwa dzisisina basa.
Vanoti chimwe chinonetsa ndechekuti vanhu vane mari yavo, vanogona kuitengesa kana kuitenga pamusika mutema, izvo vanoti zvinovabatsira kupfuura zvirikuitika kumabhanga.
Hurukuro naMuzvare Chenayi Mutambasere